Semalt: Nahoana no ratsy ny fanamarihana Spam ary ahoana no hamantarana azy ireo?
Raha manana tranokalan'ny orinasa na blôgy ianao, dia mety hahita olana momba ny fanehoan-kevitra amin'ny spam ianao. Arakaraky ny vinavina kokoa ny blôginao, ny fanamarihana bebe kokoa amin'ny spam dia azo raisina. Mampalahelo fa tsy misy zavatra hafa afa-tsy ny fanakorontanana na fametrahana plugins vitsivitsy mba hisorohana ny tsikera spam.
Comments, Pingbacks, ary Trackbacks:
Alohan'ny handehanantsika lavitra, i Frank Abagnale, manam-pahaizana ambony indrindra Semalt dia manazava ny fahasamihafana misy eo amin'ireo teny 3:
Fanehoan-kevitra - Ny fanehoan-kevitra dia naorina rehefa misy bot na olona mampiasa ny faritra fanehoan-kevitra ao amin'ny blôginao mba hanehoana ny heviny na ny eritreriny.
Pingbacks - Ny pingbacks dia noforonina ho azy rehefa misy olona mampifandray ny hafatrao amin'ny tranonkalany manokana.
Trackbacks - Ny trackback dia fampandrenesana an-tariby nataon'ireo mpitsoa-ponenana izay nahasintona ny blôginao ary namorona dingana maoderina hanalana anao amin'ny tsikera spam
Mampalahelo fa ny vokatra rehetra, ny pingbacks, ary ny tsikera dia manimba ny tranokalanao, ary tokony hanaisotra azy ireo ianao na inona na inona vidiny.
Nahoana no fanehoan-kevitra ratsy ny spam?
Manandrana manaparitaka ny isan'ny fanehoan-kevitra ny mpitoraka bilaogy sasany sy ny mpitoraka bilaogy sasany ary manohy mankasitraka ny fampihetseham-peo hitany ho ara-dalàna. Tsy fantany akory aza fa efa nahatratra ny blaoginy ireo tsikera spam ary hamorona olana ho azy ireo.
Mipetaka amin'ny rohy ratsy ny Google sy ny fitaovam-pikarohana hafa..Tsy tafiditra ao anatin'izany ireo tranonkala sy bilaogy misy rohy ambany na ratsy, fa ahitana karazana tranonkala rehetra izay miezaka mamorona ny rohy manokana ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra. Google tsy tia blaogy na tranokala miaraka amin'ny fanehoan-kevitra marobe ahitana backlinks amin'ny tranonkala hafa.
Ny fanehoan-kevitra momba ny spam dia mampiseho ny tsy fahampiana sy ny fahatakarana. Marina fa ny fanehoan-kevitra momba ny spam dia manaporofo fa tsy manam-pahalalana ianao ary tsy afaka manitsy ireo fanamarihana araka ny tokony ho izy. Ohatra, raha manana tranonkala teknolojia ianao ary mahazo fanamarihana mifandraika amin'ny fiara na fanabeazana, dia mety hisy olona manandrana mandao ny rohy ao amin'ny faritra fanehoanao ary izany no tsy maintsy amoanao.
Ny mpitsidika dia tsy hanam-pinoana ny vokatrao na ny serivisinao. Midika izany raha misy olona miantsena amin'ny rohy ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra ary alefa any amin'ny zavatra tsy misy ifandraisany, mety hamoy ny fahatokisany amin'ny marika ary tsy hividy ny vokatrao sy ny serivisy amin'ny ho avy.
Ahoana no ahafantarana ny fanamarihana amin'ny spam?
Sarotra ny mamantatra ny tsikera momba ny spam, ary ny mpamaham-bolongana sy ny webmasters sasany dia mankasitraka ireo fanehoan-kevitra marobe isanandro. Saingy azonao atao ny mitadidy ireto zavatra manaraka ireto:
Tianao ve ny mamaky ny zavatra tsy ilaina? Raha tsy izany, dia tsy tokony hankatoavinao ireo fanehoan-kevitra izay tsy ao amin'ny lahatsoratrao ary tsy misy ifandraisany amin'ny lohahevitrao. Azonao atao koa ny manala ny rohy mankany amin'ireo tranonkala amin'ireto fanehoan-kevitra ireto, hanitsy azy ireo kely ary hahazoana azy ireo.
Ny tena anarana sy ny mailaka ID dia tokony hojerena raha manaiky fanehoan-kevitra. Ataovy azo antoka fa nampiasa teny fanalahidy sasantsasany tao amin'ny fanehoan-kevitra ny olona, ​​fa tsy tokony hisy famoronana tenimiafina. Ho an'ity, afaka mametraka plugin SEO Spammer ianao.
Moa ve ilay fanamarihana mifandraika na manokana ho anao? Tokony hijery tsara ianao raha misy ifandraisany amin'ny lahatsoratrao ny tsetsatsetsa na tsia. Tsy ilaina ny mitazona fanehoan-kevitra maromaro raha toa ka tsy ao amin'ny tranokalanao na bilaogy izy ireo.
Raha ny fanaraha-maso ny fanehoan-kevitra amin'ny spam, dia mila mitadidy ireo teboka voalaza etsy ambony ianao, ary tokony ho tsara ianao. Misy tranonkala sy bilaogy sasantsasany mampiasa plugins manokana mba hanaisotra fanamarihana spam, tahaka an'i Akismet Source .